खुशीकाे खबरः के तपार्इलार्इ थाहा छ? आजदेखि निःशुल्क ‘ट्रायल’ सेवा शुरू भो रेन्त! – PathivaraOnline
Home > बिजनेस > खुशीकाे खबरः के तपार्इलार्इ थाहा छ? आजदेखि निःशुल्क ‘ट्रायल’ सेवा शुरू भो रेन्त!
खुशीकाे खबरः के तपार्इलार्इ थाहा छ? आजदेखि निःशुल्क ‘ट्रायल’ सेवा शुरू भो रेन्त!
admin October 26, 2018 बिजनेस 0
काठमाडौँ । उपत्यकाका तीन यातायात व्यवस्था कार्यालयले चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणका लागि निःशुल्क ‘ट्रायल’ सेवा शुरु गरेका छन् । लाइसेन्स वितरणका लागि ‘ट्रायल’ परीक्षा लिँदा शुल्क लिने व्यवस्था गरिएकोमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परी निःशुल्क सेवा दिन आदेश भएपछि उपत्यकाका तीन कार्यालयले आजदेखि निःशुल्क ‘ट्रायल’ सेवा शुरु गरेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
निःशुल्क ‘ट्रायल’ सेवा शुरु गरेका कार्यालयमा सुकेधारा, ठूलो भ¥याङ र भक्तपुरस्थित सल्लाघारी रहेको विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले राससलाई जानकारी दिनुभयो । सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क ‘ट्रायल’ लिने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएपछि तीनै कार्यालयले चालक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने विद्यालयलाई प्रस्ताव पेश गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । जसअनुसार सुकेधारा कार्यालयका लागि तीन, ठूलो भ¥याङका लागि दुई र भक्तपुरका लागि एक प्रशिक्षण केन्द्रले आवेदन दिएका थिए ।
आवेदन दिएका प्रशिक्षण केन्द्रलाई पालैपालो ‘ट्रायल’ गर्ने अनुमति दिएको उहाँले बताउनुभयो । सुकेधाराको ‘ट्रायल’ गर्ने अनुमति पाएको भेहिकल एकेडेमी एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि गुर्जुधाराले आजदेखि शुरु गरेको छ । ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको केन्द्रमा आज १५० जनाको ‘ट्रायल’ भएको प्रबन्ध निर्देशक माधवप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । पहिलो दिन आज कार चालक अनुमतिपत्र लिन चाहनेको ‘ट्रायल’ भयो ।
अरु सेवा पनि छिट्टै शुरु हुने केन्द्रले जनाएको छ । ठूलो भ¥याङ र भक्तपुर कार्यालयले पनि यसै सातादेखि सेवा शुरु गर्ने विभागले जनाएको छ । एकान्तकुना कार्यालयले भने १० वर्षका लागि शुल्क लिएर ‘ट्रायल’ लिने सम्झौता गरिसकेकाले निःशुल्क हुने छैन ।
३ महिनासम्म उपलब्धि सून्य निर्मला बलात्कार हत्या प्रकरणको विहानै आयो यस्तो खबर
बिजुली बसमा सरकारकाे झेल, लुम्बिनीलाइ दिएकाे बस राजधानीमा चलाउने यस्तो रहेछ खेल!
संसदमा महराले पास नगराएको ‘एमसीसी’ को नालीबेली यस्तो, के यसैका कारण फसाइएका हुन महरालाइ?
नयाँ वर्ष लक्षित अभियान सुरु, स्कुटर जित्ने यस्तो छ है अवसर
संसार छाड्ने’ म्यासेज सामाजिक सञ्जालमा लेखेर युवक बेपत्ता……
यी युवती संग बिहे गर्ने पु’रुषले साढे ३ करोड इनाम पाउने
स’म्भो-गअघि म’हिला-पु’रूषले जान्नैपर्ने १० कुरा !